စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းအချက်အလက် - ကွမ်ကျိုး Junshang ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd.
မော်တော်ကား ထိတ်လန့်ခြင်း စုပ်ယူ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ရာဘာ လက်
ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်, အဲဒီမှာ ဖြစ်ကြသည် သုံး အရေးကြီးတယ် ရာဘာ အင်္ကျီလက် အပေါ် က ကား အကယ်၍ ကy ဖြစ်ကြသည် မဟုတ်ဘူး အစားထိုး in အချိန်, ကy အလိုတော် ဖြစ်လိမ့်မည် အလွန် မလုံခြုံဘူး!
ဘယ်လိုလဲ ရန် သိမ်းဆည်းပါ က ရာဘာ လက်
ရော်ဘာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြသည် အလွန် ဘုံ in ငါတို့ ဘဝ။
လေ Strut အစားထိုး သံသရာ နှင့် ဝယ်ယူ
မပြုမီ ဝယ်ယူ က ထုတ်ကုန် in လေ Strut, ကျေးဇူးပြု ဖြစ်လိမ့်မည် သေချာတယ် ရန် စစ်ဆေးပါ က ကား မော်ဒယ် ရွှေ့ပြောင်းခံရ နှင့် oကr သတင်းအချက်အလက် ရန် enသေချာတယ် သော မင်း ဝယ်ပါ က မှန်ပါတယ် အမျိုးအစား ၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
လေ Strut ပြုပြင် စစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်း
The ထိတ်လန့်ခြင်း စုပ်ယူ လုပ်ရမည် ဖြစ်လိမ့်မည် စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည် အပေါ် က အထူး စမ်းသပ်မှု ဖြစ်လိမ့်မည်nch နောက်မှ က inspectiအပေါ် နှင့် ပြုပြင်။
လေ Strut ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်း
In အမိန့် ရန် လျင်မြန်စွာ ကttenuကte က တုန်ခါမှု ၏ က ဘောင် နှင့် က ကိုယ်ခန္ဓာ နှင့် တိုးတက်လာသည် က စီးနင်းလိုက်ပါ နှစ်သိမ့်မှု နှင့် နှစ်သိမ့်မှု ၏ က ကား, က ကား ရပ်ဆိုင်းမှု စနစ် ဟုတ်တယ် ယေဘုယျအားဖြင့် တပ်ဆင်ထား နှင့်အတူ က ထိတ်လန့်ခြင်း ကbsorber, နှင့် က ကuရန်mobile ဟုတ်တယ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ ကs က two-wကy ကction ဆလင်ဒါ အမျိုးအစား ထိတ်လန့်ခြင်း ကbsorber.
လေ Strut ထုတ်ကုန် နိဒါန်း
In က ရပ်ဆိုင်းမှု စနစ် တုန်ခါမှု ဟုတ်တယ် ထုတ်လုပ်ပြီး ကြောင့် ရန် က သက်ရောက်မှု ၏ က elastic အဖွဲ့ဝင်